Si dhakhso ah Ku iibso Kuna Iibi Lacag Oonleen ah | Paxful
Ku hel lacag Oonleenka ah barta Paxful
Ku iibso kuna iibi lacagaha oonleenka ah qaab fudud. Furo ciwaankaaga Paxful, biloow inaad aqbasho lacagaha laguusoo diro, oo shaqayso lacag.
In la badan 350 qaab oo aad ku iibsan karto kuna iibin karto Bitcoin
Dooro nooca lacag bixinta aad doonayso kadibna toos ganacsi ula samee dadka kale ee kula midka ah!
Iibi Bitcoin Iibso Bitcoin
Lacagaha Lagu Diro Baanka
Hel lacag bixinta Bitcoin kaaga oo toos loogu diraayo koontadaada baanka meel kasta oo aad caalamka ka joogtaba.
Ku badalo Kaash
Lacagta kaash uga qaado shaashadaada ama meesha lacag qaadashada ee aad ku qanacsan tahay ee kuugu dhaw.
Kaydadka Oonleenka ah
Udir lacagta wax ka badan 140 kaydka lacagta oonleenka ah aduunyada oo dhan.
Kaararka Hadiyadaha ee Qiimo Dhimista leh
Iibi Bitcoin kaaga si aad ugu hesho qiimo dhimis wayn kaararka waawayn ee hadiyada ee kasoo baxa iTunes, Amazon iyo kuwo kale.
Lacago Oonleen ah
Ku iibso Bitcoin kaaga lacag kasta oo oonleen ah oo caan ah lagana heli karo bartaas.
Badeecooyinka iyo Adeegyada
U adeegso Bitcoin kaaga si aad oonleen ugu iibsato wax kasta oo cadadkaan ku jira.
Paxful waxay kuu fududeysay kaagana dhigtay ammaan inaad ku ganacsato Bitcoin. Hoos ka eeg yabooha ugu wanaagsan Iibsana Bitcoin adoo isticmaalaya nidaamka lacag dirista Baanka keliya adoo raacaya 5 taan tallaabo ee fudud.
Ma doonaysid miyaa inaad guriga ka baxdo? Waxaad adeegsan kartaa tiro kamid ah ablikeeshinada lacag bixinta ugu caansan.
Ma haysataa kaarka hadiyada oodan u baahnayn? Halkaan si dhakhso leh uga iibso Bitcoin.
Lacag bixinta kaashka ah
Iibso Bitcoin oo ku dhiib lacagta ayadoo kaash ah. Waa wax sidaa u fudud. Looma baahna koontada baanka.
Kaarka Lacagta kaashka ah/Amaahda ah
Paxful waxay kuu fududeysay kaagana dhigtay ammaan inaad ku ganacsato Bitcoin. Hoos ka eeg yabooha ugu wanaagsan Iibsana Bitcoin adoo isticmaalay Kaararka Deynta/Kaashka keliya adoo raacaya 5 taan tallaabo ee fudud.
Ku iibso lacagahaaga oonleenka ah ama tookanada Bitcoin oo isla markaba qaab oonleen ah loogu shubaayo kaydkaaga kaydka lacagta.
Oonleen ku ganacso wax kasta oo aad mulkiyadiisa leedahay, laga bilaabo baabuurta iyo dahabka illaa adeegyada dukaanka iyo agabka korontada ku shaqeeya, kuna iibso Bitcoin.
Arag Dhammaan Yaboohyada
Paxful waxay ku jirtaa warbaahinta
Paxful waa goob lacagaha oonleenka ah oo caan ah waxaana aad loogu falanqeeyay wargaysyada caanka ah oo badan. Mid kamid ah higsiyadeenu waa inaan 100 dugsi ka dhisnaa Afrika. Daawo muuqaalka hoose si aad xog uga ogaato mashruuceena #builtwithbitcoin.
Noqo qof Bitcoin ku iibiya Paxful
Noqo qof wax ku iibsha Paxful oo awood sii malaayiin dad ah oo ku dhaqan aduunka si ay u helaan xoriyad dhaqaale. Bixi noocyada tirada badan ee lacag bixinta oo ay jecel yihiin iibsadayaashu, meesha ka saar dalaaleeyda, anaga ayaana kaa caawin doona dhammaan khayraadka iyo tusmada loogu baahan yahay inaad guulaysato.
Yaboohyada Lagu Kalsoon yahay
Iibiyaasha lagu kalsoon yahay
Malaayiin ayaa marhoraba si guul leh u isticmaalay Paxful waxayna hayaan waxyaabo badan oo wanaagsan oo ay nooga warameen. Halkaan ayaad ka helaysaa fikradaha isticmaalayaasheenu ka qabaan Paxful, ayagoo erayadooda ku hadlaaya.
Adoo adeegsanaaya Paxful waxaad awoodaa
Inaad kor u qaado xoriyadaada dhaqaalaha aadna gaarsiiso heer sare adoo adeegsanaaya Paxful.
Ku iibso Bitcoin Oonleen
Ku ganacso dhex-dhexaadiye amaan ah
Bitcoin kaaga waxaa lagu haynayaa dalaalkeena amaanka ah ilaa ganacsiga si guul leh loo dhameeyo.
Nidaamka fikir dhiibashada isticmaalaha ayaa kuu sahlaysa inaad aqoonsato isticmaalayaasha kalsoonida iyo khibrada leh ood la ganacsan karto.
Hel kayd bilaash ah
Hel dakhli dheeraad ah
Biloow ku ganacsiga Paxful
Maanta isqor si aad u hesho kaydkaaga bilaashka ah ee oonleenka ah. Waxaad isla markaba bilaabi kartaa iibinta iyo iibsiga Bitcoin, bilaa caqabad.